Muxuu ahaa Ujeedkii laga lahaa raafkii maanta ka dhacay Jowhar & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muxuu ahaa Ujeedkii laga lahaa raafkii maanta ka dhacay Jowhar & Wararkii...
Muxuu ahaa Ujeedkii laga lahaa raafkii maanta ka dhacay Jowhar & Wararkii ugu dambeeyay
Jowhar (Halqaran.com) – Ciidamada amniga ee Maamulka Hirshabelle ayaa hawlgal raaf ahaa ka sameeyay xaafadda Hanti Wadaag ee Magaalada Jowhar, iyagoona ku soo qab qabtay dad fara-badan.
Hawlgalka oo bilowday waaberigii saaka ayaa qaatay muddo saacado ah, waxaana lagu soo qab qabtay dad gaaraya boqolaal ruux oo dhalinyaro u badan.
Ciidamada ayaa isku shaandhayn ku sameeyay dadkii hawlgalka lagu soo qab qabtay, in yar oo ka mid ah ayay dib u sii daayeen, intii kalena waxay ku xireen Saldhiga Booliska Jowhar.
Tallaabada lagu soo qab qabtay dhalinyaradaasi ayaa waxay ka dambeysay ka dib markii qarax nooca gacanta laga tuuro uu xalay ka dhacay xaafadda Hanti Wadaag, laguna dilay Gudoomiye Kuxigeenkii Dhinaca Amniga ee Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe, Muxumed Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay.
Madaxweynaha Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare ayaa amray in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyay dilka Gudoomiye Kuxigeenkii Dhinaca Amniga ee Gobolka Shabellaha Dhexe iyo wiilkiisiiba.
Saxafiyiinta Magaalada Jowhar ayaa soo sheegaya in Ciidamada Booliska ay wadaan su’aalo ay weydiinayan dhalinyarada tuhunka ugu xiran Saldhiga Booliska.
Ururka Al Shabaab ayaa barrahooda Internet-ka ku sheegtay masuuliyadda dilka loo gaystay Muxumed Sugaal Cismaan, Gudoomiye Ku-xigeenkii Dhinaca Amniga ee Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe iyo wiilkii uu dhalay.
Dhanka kale, dadweyne ka careysan hawlgalka raafka ah ayaa maanta bannaanbax ka dhigay Magaalada Jowhar, iyagoona dalbanayay in dib loo soo sii daayo dadka lagu xir xiray magaalada.
Maamulka Hirshabelle ayaa muddooyinkii ugu dambeysay la foollaneysay mowjado weeraro oo qaraxyo u badan, oo kaga imaanaya dhanka Ururka Al-Shabaab.
raaf maanta ka dhacay magaalada Jowhar